दशथरी बिमारीले थलिए मर्डी, चासो दिएनन् नेताले « Loktantrapost
दशथरी बिमारीले थलिए मर्डी, चासो दिएनन् नेताले
३१ असार २०७७, बुधबार २१:१३
झापाली कम्युनिस्ट सन्थाल नेता कमलेश मर्डी ।
भद्रपुर, २९ असार । सन्थाल समुदायका झापाली कम्युनिस्ट नेता कमलेश मर्डी दशथरी बिमारीले थलिएर उपचारका लागि मेची अञ्चल अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
तीन दिन अघि शरीरमा रगत कम हुने, खुट्टा सुन्निने, झाडापखाला लाग्ने, पेट पोल्ने, खाना नरुच्ने लगायतको स्वास्थ्य समस्या देखिएर गम्भीर अवस्था सिर्जना भएपछि ४९ वर्षीय मर्डीलाई उनकी पत्नी र छोरीले अस्पतालमा भर्ना गरेका थिए ।
अस्पतालको बेडमा भर्ना भएका मर्डीको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा उनको पार्टी नेकपाका ठूला पदमा पुगेका मेचीनगरका नेताले चासो दिएका छैनन् । बरु भद्रपुरका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठ अस्पताल आएर सोधीखोजी गरेको मर्डी बताउँछन् ।
आफ्नो गम्भीर बन्दै गएको स्वास्थ्य र पत्ता नलाग्ने रोगका बारेमा जानकारी दिन फोन गर्दा केही नेकपा नेताले रिसिभ नै नगरेको र केहीले आफु व्यस्त रहेको बताएको भन्दै मडीले चित्त दुखाएका छन् । भोटका बेला चिन्ने तर बिरामीका बेला नचिन्ने नेताको बानीले आफु दुःखी भएको उनको भनाई छ ।
एक दशकदेखि एउटा मृगौला ड्यामेज भएको र तीन पटकसम्म कालाजार नामक रोग लागेर उपचार गराइसकेका उनको घर मेचीनगर–१५ (तत्कालीन ज्यामिरगढीको भिण्डीबस्ती) हो ।
खेती किसानी गर्दै आएका मर्डी नेकपाका जिल्लाभर सुपरिचित कार्यकर्ता हुन् । माले र पछि एमाले पार्टी छँदा उनलाई चुनावका बेला सन्थाल समुदायको भोट फकाउन नेताहरुले खटाउने गर्दथे । यो क्रम अहिलेसम्मै चल्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अग्रणी बामपन्थी नेता सीपी मैनाली लगायतसँग लामो अवधि जेलमा सहयात्रा गरेका कम्युनिस्ट योद्धा मङ्गल मर्डी सतारको नाताले भतिज पर्ने कमलेश मर्डी कट्टर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुनुका साथै स्थानीय क्षेत्रमा सन्थाल समुदायको सामाजिक सुधारका अभियन्ता समेत हुन् ।
सन्थालहरुले मदिरा सेवन गरेर आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्यको बर्बादी गरिरहेको भन्दै गत वर्ष उनले सामाजिक सुधारका लागि मदिरामुक्त जातीय पुराणको आयोजना गरेका थिए ।
कमलेश मर्डीलाई अस्पतालको बेडमा रुँगिरहेका उनकी पत्नी र छोरी ।
पत्ता लागेन रोग
बुधवार साँझ मेची अञ्चल अस्पतालको मेडिकल वार्डको क्याबिन नं. ५ को ढोका उघार्नासाथ झिनो शरीरका कमलेशलाई बेडमा कम्बल ओढेर सुतिरहेको भेटियो ।
छेउमा स्लाइन स्ट्यान्ड र टेबुल थियो । स्टेन्डमा अड्काइएको पोकाबाट तप्प तप्प रगत मर्डीको हातको नसामार्फत शरीरभित्र पसिरहेको थियो ।
असार २९ गते उनलाई मेचीमा ल्याइएको थियो । रुँगालु् थिए उनकी पत्नी र छोरी । बिमामार्फत ल्याइएका स्लाइनका भरी बोतल र दवाइका पोका छरपस्ट थिए टेबुलमा ।
मर्डीले अस्पतालमा जति जँचाए तापनि रोग पत्ता नलागेको गुनासो गरेका छन् । गत साता उनलाई विर्तामोडको कनकाई अस्पतालमा समेत उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँ पनि उनको रोग पत्ता लागेन ।
उनलाई सुइँको डोज दिन आएकी एक नर्सलाई सोध्दा उनले पनि मर्डीलाई के रोग लागेको हो बताउन सकिनन् । अस्पतालमा उनको रगत, खकार, दिसा, पिसाब सबै जाँच गरिएको छ । तर डाक्टरहरुले के रोग लागेको हो मर्डी र उनको परिवारलाई बताएका छैनन् ।
मेसुले भने –सल्लाह गर्छु
अस्पतालका प्रमुख डा. पिताम्बर ठाकुरले तीन दिनदेखि अस्पतालको बेडमा रहेका मर्डीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा विहीवार उनको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुसँग सल्लाह गर्ने बताएका छन् ।
उनले मर्डीलाई के रोग लागेको हो पत्ता लगाइने र हरसम्भव उपचार गरिने बताए । आर्थिक अवस्था दयनीय भएका मर्डीको उपचार स्वास्थ्य बीमामार्फत भइरहेको छ ।
मर्डीको रक्तसमूह ओ पोजेटिभ हो । रेडक्रस झापाले उनलाई आवश्यक पर्ने २ पोका रगत उपलब्ध गराइसकेको छ । यति रगत चढाउँदा समेत उनी तङ्ग्रिन सकेका छैनन् ।
नेकपा मेचीनगरका अध्यक्ष माधव अर्यालले मर्डीको अवस्थाको बारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘उहाँलाई उपचार गरेर निको बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग पार्टीले गर्नेछ’–अर्यालले भने ।
मेचीनगर–१५ का नेकपा नेता चेतन बिष्टले उनी पार्टीका तल्लो तहमा बसेर योगदान पुर्याउने आदिबासी नेता भएको उल्लेख गर्दै उनको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने बताएका छन् ।